भारतको दादागिरीविरुद्ध कसरी लड्ने हामी कसरी सिकाउने भारतलाई पाठ र दुष्ट छिमेकीबाट असल बन्ने ज्ञान – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भारतको दादागिरीविरुद्ध कसरी लड्ने हामी कसरी सिकाउने भारतलाई पाठ र दुष्ट छिमेकीबाट असल बन्ने ज्ञान
काठमाडौँ – सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा मुहान भई बगेको काली नदीलाई सीमा स्वीकारे पनि नेपालको नक्सामा किन त्यो समेटिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस सरकारले निकालेको नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नेपालमै रहेको स्पष्ट देखाइएको छ । यद्यपि २०३२ सालमा नापी विभागले प्रकाशन गरेको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा किन समेटिएन ? नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नक्सा तयार पार्ने क्रममा कालापानी क्षेत्रको सीमामा द्विविधा देखियो । लिपुलेक र कालापानी मात्र राख्ने कि लिम्पियाधुरासमेत नक्सामा समेट्ने ?
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले सुरुका दिनमा भारतमा छापिएका नक्सा नै नेपालका सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने गरेको स्मरण गर्दै ती नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभागमा पाइएको बताउनुभयो । उहाँले नापी विभागबाट तयार पारिएको नक्सामा किन लिम्पियाधुरा समेटिएन भन्ने जिज्ञासामा कालापानी क्षेत्रमा विवाद रहेकाले कहाँसम्म नक्सामा समेट्ने भन्ने समस्या भयो । समस्या नदेखिएको ठाउँ मात्र नक्सामा समेटिएको हो भन्नुभयो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
सीमाविद श्रेष्ठका अनुसार सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस सरकारले निकालेको नक्सा नै आधिकारिक नक्सा मानिनुपर्छ । सो नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीलाई नै सीमा मानिएको छ ।